१६ वर्षदेखि एजेन्ट 'मामाको छोरा' खोज्दै आएका बदले भन्छन्- 'न्याय दिलाई दिनुस्' - Hamrokhotang
Home » News » Photo Gallary » १६ वर्षदेखि एजेन्ट 'मामाको छोरा' खोज्दै आएका बदले भन्छन्- 'न्याय दिलाई दिनुस्'
१६ वर्षदेखि एजेन्ट 'मामाको छोरा' खोज्दै आएका बदले भन्छन्- 'न्याय दिलाई दिनुस्'
By: HamroKhotang.com on Monday, July 06, 2015 /
असार २१ खोटाङ । “एजेन्ट खोज्दा–खोज्दै सोह्र वर्ष बित्यो, अब त हैरान भइसकेँ !” निक्कै निराश अनुहारमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “सक्नुहुन्छ भने, मलाई न्याय दिलाइ दिनुस् ।”
जिल्लाको उत्तरी गाविस महेश्वरी–७ का बदले कामीले सदरमुकाम दिक्तेलस्थित सुरक्षित आप्रवासन सूचना केन्द्रमा आएर यस्तो बिलौना गर्नुभएको हो । कामीलाई आफन्तले विदेश पठाइ दिन्छु भन्दै ठगी गरेपछि उनको खोजीमा हिँडेको सोह्र वर्षपछि सूचना केन्द्र गुहार्न आउनुभएको थियो ।
आफ्नै मामाको छोरा बाकाचोल–४ का गणेश विश्वकर्माले २०५६ सालमा विदेश पठाइ दिन्छु भन्दै उनीबाट ५० हजार रुपैयाँ लिएको बदलेको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “तिमीलाई साउदी लैजान्छु भन्दै पैसा लिए, पैसा लिएपछि न विदेश पठायो, न त पैसा नै फिर्ता दियो । बरु त्यो पैसाले आफू चाँही साउदी गएर आएपछि धरान बसाईँ सरेर राम्ररी घरजम गरेर बसेका छन् !”
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा आफन्तबाटै गठीमा परेपछि न्याय माग्न सदरमुकाम दिक्तेल आउनुभएका खोटाङ महेश्वरी–७ का बदले कामी । उहाँ सोह्र वर्षदेखि आफूलाई गठी गर्ने मामाको छोरा गणेश विश्वकर्माको खोजीमा हुनुहुन्छ ।
बदलेका अनुसार साउदीबाट ४४ महिनामा गाउँ फर्केका गणेशले उनीसँगै अन्य आठ जनाको नाम भिसा भन्दै कम्प्युटर टाइप गरेर ल्याएका थिए । उहाँले भन्नुभयो, “कम्प्युटरमा टाइप भएको नाम देखेर विश्वासका साथ ऋण काढेर विदेश जानका लागि उनलाई पैसा बुझाएँ, उनले साउदीबाटै फसाउने योजनाका साथ गाउँ आएको रहेछ ! केको विदेश लान्थे, अहिले त फोन सम्पर्क समेत हुन छाड्यो ।”
ऐसेलुखर्क बजारमा सुन÷चाँदीको गहना बनाउने काम गर्दै आउनुभएका बदलेलाई विदेशबाट ठाँटिएर गाउँ आएका गणेशले भेट हुनसाथ विदेश जान अनुरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो । त्यो क्षण सम्झँदै उहाँले भन्नुभयो, “तपाई नाताको मान्छे भनेर साउदीमा सुन पुछ्ने कामको भिसा ल्याइदिएको छु, अब विदेश जानुपर्छ । तत्काल धरौटी रकम खोज्नुस्, मासिक १२ हजारभन्दा बढि कमाइ हुने ठाउँमा काम लगाइ दिन्छु भनेपछि म पनि विदेश जान तयार भएको थिएँ, अन्तमा फसादमा परेँ !”
गणेशको कुरा सुनेर विदेश जान तयार हुनुभएका बदलेले भन्नुभयो, “आफ्नै मामाको छोराले भनेको कुरामा शंका गर्ने ठाउँ नै रहेन । अझ भिसा हो भन्दै कम्प्यूटरमा टाईप गरेको आफ्नो नाम भएको कागज देखेपछि किन शंका गर्नु ? तर, पछि आएर उनको व्यवहार सम्झँदा पनि घिन लागेर आउँछ ।”
कुनै कुरा नसोची आफूले चलाइ रहेको पसल बन्द गरेर विदेश जानका लागि राहदानी बनाउन काठमाडौं गएको बदलेको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौं पुगेर राहदानी बनाए, दश हजार बुझाएर बनाएको राहदानी गणेशलाई दिए तर, विदेश पठाउने नाममा ठगीमा परेको पत्तै भएनँ !”
गणेशसँगै गएर मेनपावर कम्पनीमा राहदानी बुझाएपछि अब कहिले मेरो भिसा आउछ भनेर उनलाई सोध्दा एक महिनापछि हुन्छ । पन्ध्र दिनपछि हुन्छ । दशैपछि हुन्छ । तिहारपछि हुन्छ । ईदपछि हुन्छ भन्दा–भन्दै पाँच वर्षसम्म झुलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले आएर सबै कुरा बुझ्दा उनले त्यो कम्पनीमा मेरो राहदानी समेत पेश गरेको रहेनछ, विदेश जानका लागि काठमाडौं मात्र ३५ चोटी पुगे !”
लामो समयम्म पनि विदेश जान नकेपछि घरपरिवारले कच्कच् गर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । सबैतिरबाट हैरान खानुभएका उहाँले भन्नुभयो, “घरको कच्कच त त हुन्थ्यो–हुन्थ्यो, समाजमा समेत हाँसोको पात्र बने ! त्यति हुँदाहुँदै पनि विदेश जान मेरो सपना टुङ्गिएको थिएन, हुँदै नभएपछि पैसा चाँही फिर्ता ल्याउँछु भन्ने लागेको थियो, त्यो पनि सफल भएको छैन ।”
२०५६ सालमा लिएको ५० हजार ऋण बढेर अहिले सात लाख नाघेको बदलेको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सयकडा तीन रुपैयाँका दरले ब्याजमा काढेको ऋण तिर्नलाई हातमा फुटेको कौडी छैन, यता माग्यो उता ति¥यो । घर व्यवहार चलाउन त परैजाओस्, त्यही रकम फिर्ता गरेर साहुको ऋण तिर्न पाए हुन्थ्यो !”
घरमा पालिएको दुहुनो भैँसी, हल गोरु सबै साँहुले लगीसकेको उहाँको भनाइ छ । गहभरी छचल्किएको आँसु पुछ्दै उहाँले भन्नुभयो, “साहुले दुहुनो भैँसी र हल गोरु तान्दै लैजाँदा मेरा छोराछोरी र श्रीमतीको मन कस्तो भयो होला ! सोच्न पनि सक्दिनँ ।”
कामीका अनुसार विदेश लैजान्छु भन्दै उहाँलाई ठगी गर्ने गणेश हाल साउदी अरबमा रहेका छन् । उनको परिवारलाई सम्पर्क गर्दा उल्टै ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेको कामीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धाउँदा–धाउँदा उनले लिएको पैसाको तमसुक चाँही बनाएको छु, यही तमसुकको आधारमा साँवाब्याज फिर्ता गराइ दिनुप¥यो ।”
यसबारे पीडित कामीसँग रहेको डकुमेन्टका आधारमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचना केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत रमेश राईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठगी गर्ने र ठगीमा पर्ने दुवैजना जिल्लाकै भएकाले चाँडै नै समस्याको समाधान हुने सम्भावना छ, यसका लागि प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेका छौं ।”